နန်းဆု ကို သတိရကြောင်းတွေ ကို ရင်ဖွင့်လိုက် တဲ့ G-Fatt – Shwewiki.com
ပ ရိသတ်ကြီးရေ G-Fattကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်းရံခြသ်ခံရတဲ့ Hip Hop အဆိုတော်တစ်ဦးဆိုတာ အမှန်ပါပဲနော်။ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေဝန်းရံအားပေးခြင်းကိုခံရရုံသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့ထိမိနေတဲ့စာသားတွေ Flow တေါကို အသေကြွေကြတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေးပရိသတ်တွေသာမက မူလတန်းကလေး အရွယ်တွေကပါ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။
သူ့ရဲ့အချစ်ရေးကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရှမ်းတရုတ်ကပြားမလေးနန်းဆုရတီစိုးနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲ ပြတ်စဲကာ Singleအဖြစ်နဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအားစိုက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ပြတ်စဲမှုအတွက် ဝမ်းနည်းနေကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါ
ဒီနေ့မှာတော့G-fattတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်လာတာတွေ့ရပါတယ်နော်။”အောင်ပန်းမြို့က ပြန်ခဲ့ပြီ . လမ်းမှာ စဉ်းစားလာမိတာက ဒီရက်ပိုင်း မင်းမရှိတဲ့ ရာသီ ကို အောင်ပန်းနဲ့ကလော ဘက်မှာ MV ရိုက်ဖို့ပဲ . ဘယ်လိုပုံစံရိုက်မလဲ ဘယ်သူနဲ့ရိုက်မလဲ ဘယ်တော့ထွက်ရင်ကောင်းမလဲ . စတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးနဲ့တင်လာခဲ့တာပါ။ တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့ G-Fattတစ်ယောက် နန်းဆုကို သတိရနေတာလားလို့မှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပါပဲနော်။ပရိသတ်ကြီးရော G-fattတစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကိုလွမ်းနေလဲဆိူတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ပရိသတျကွီးရေ G-Fattကတော့ တဈနိုငျငံလုံးကပရိသတျတှေ အားပေးဝနျးရံခွသျခံရတဲ့ Hip Hop အဆိုတျောတဈဦးဆိုတာ အမှနျပါပဲနျော။ မိနျးကလေးပရိသတျတှဝေနျးရံအားပေးခွငျးကိုခံရရုံသာမက ယောကျြားလေးပရိသတျတှကေလညျး သူ့ရဲ့ထိမိနတေဲ့စာသားတှေ Flow တေါကို အသကွှေကွေတယျလို့ ပွောရမှာပါ။ အခုလကျရှိမှာတော့ ယောကျြားလေးမိနျးကလေးပရိသတျတှသောမက မူလတနျးကလေး အရှယျတှကေပါ အားပေးဝနျးရံခွငျးခံရတဲ့ သူတဈယောကျလို့ဆိုရမှာပါ
သူ့ရဲ့အခဈြရေးကတော့ နိုငျငံကြျောမငျးသမီးလေး တဈဦးဖွဈတဲ့ ရှမျးတရုတျကပွားမလေးနနျးဆုရတီစိုးနဲ့ ခဈြကွိုကျခဲ့ပွီးနှဈဦးသဘောတူလမျးခှဲ ပွတျစဲကာ Singleအဖွဈနဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေိုအားစိုကျလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့နှဈယောကျပွတျစဲမှုအတှကျ ဝမျးနညျးနကွေတယျလို့ဆိုရမှာပါ
ဒီနမှေ့ာတော့G-fattတဈယောကျ သူ့ရဲ့ရငျတှငျးခံစားခကျြတှကေိုရငျဖှငျ့လာတာတှရေ့ပါတယျနျော။”အောငျပနျးမွို့က ပွနျခဲ့ပွီ . လမျးမှာ စဉျးစားလာမိတာက ဒီရကျပိုငျး မငျးမရှိတဲ့ ရာသီ ကို အောငျပနျးနဲ့ကလော ဘကျမှာ MV ရိုကျဖို့ပဲ . ဘယျလိုပုံစံရိုကျမလဲ ဘယျသူနဲ့ရိုကျမလဲ ဘယျတော့ထှကျရငျကောငျးမလဲ . စတဲ့အတှေးတှနေဲ့ပေါ့ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးနဲ့တငျလာခဲ့တာပါ။ တဈခြို့ပရိသတျတှကေတော့ G-Fattတဈယောကျ နနျးဆုကို သတိရနတောလားလို့မှတျခကျြတှပေေးနကွေတာပါပဲနျော။ပရိသတျကွီးရော G-fattတဈယောကျ ဘယျသူ့ကိုလှမျးနလေဲဆိူတာမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။